SomaliTalk.com » SOOMAALI-WAYN: Dhalashadeedii iyo Dhabar-jabkeedii | Casharkii III-aad
SOOMAALI-WAYN: Dhalashadeedii iyo Dhabar-jabkeedii | Casharkii III-aad
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Friday, July 1, 2011 // 1 Jawaab
Markii laga itaal-roonaadey dhaqdhaqaaqii dagaalamayay ee Daraawiishta, waxaa xigey ciidda Soomaaliya in ay noqoto meel ay ku baratamaan xooggagii shisheeye ee damaca ka lahaa degaanka. Gobollada galbeedka waxay kamid ahaayeen goobahaas la tilmaansadey. Fadhigii Berliin (1884-1885) ee lagu qeybsadey degaamada qaaradda Afrika, maahayn mid lagu xadeeyey xudduudihii ay kala qaadan lahaayeen xoogaggii boobka ku socdey. Laakiin degaamadii ay ku foofi lahaayeen, si guud ayay u magacawdeen. Dowladuhu waxay markaas ku kala duwanaayeen sahamada iyo arahyada u kala joogey degaamada ay ku socdeen iyo xogta ay ka hayeen. Cid kasta oo degaanadaas la tilmaansadey ay horey u gaareen arahyadooda, waxay ka xog-ogaalsanaayeen kuwii ay arahdoodu goor danbe timid degaanka. Waxaa halkaas ka dhashay in xoogaggii shisheeyaha ahaa ay boobkii ku kala dhul badsadaan. Taasi waxay sabab u noqotey, Ingiriiska iyo Faransiiska in ay qeyb libaax ka helaan dhulkii qaaradda Afrika.
Sida aanu soo xusney, xilligii ay is-weydaananayeen labada qarni (XIX-aad iyo XX-aad), xoogaggaasi waxay kala boobayeen dhulkii ay xuduudda u sameysan lahaayeen. Dhulkii ay Soomaalidu ku dhaqneyd, Jabuuti iyo gobollada waqooyi marka laga yimaado, gobolka Ogaadeenya ayaa isna kamid ah dhulka ay isha ku hayeen. Waxaa xusid mudan in xilliga sidaas loo boobayo dhulkoodii, Soomaalida wixii dabrayay oo ka hor-taagnaa in ay la garramaan cadowgan boobka ku haya, waxay ahayd iyaga oo wacyigooda uu hooseeyey. Qoys walba intaas ay ku dhaqan yihiin ayay xaaladdeeda ogaayeen. Wacyiga dowladnimo iyo garashada urursanaan in wax lagu difaacdo waa ay ku yareyd bulshada.
Dhulka gobolka Ogaadeenya wuxuu ahaa mid arahyadu ayan waxba ka ogayn wixii ka horeeyey dabayaaqadii qarnigii XIX-aad. Gobolka wuxuu ku jiraa dhulka gudaha ah oo wuxuu ka fog-yahay xeebaha dhaadheer ee ku teedan Soomaaliya, kuwaas oo ay ku imanayeen arahyada reer Yurub. Waxaa taas u weheliyay rag badan oo kamid ah arahdii reer Yurub ayaa lagu dilay gobolka. Sidaa darteed, nuskii danbe ee qarnigii XIX-aad, sahmiyayaasha reer Yurub waxay degaankaas u yiqiineen meesha dunida ugu khatarta badan.
Dhan kale, xilligaas Talyaaniga ayaa isaguna si xooggan u daneynayay gobolka Ogaadeenya. Isagu wuxuu kula baratamayay Itoobiyaanka. Laakiin hankii uu lahaa wuxuu ku jabey dagaalkii Cadawa (1896-kii) oo uu Itoobiya la galey, kaas oo si fool xun loogu jebiyay. Talyaaniga oo ahaa midka weerarka qaadey ayaa ujeeddadiisu waxay ahayd in uu isku qabsado oo maamulkiisa hoos geeyo degaanka bariga qaaradda Afrika. Ereteriya, Itoobiya iyo dhulka ay Soomaalidu degaan dhamaan ayuu doonayay in uu hal maamul ku urursho, isaguna uu ka taliyo.
Boqortooyadii Xabashida ayaa iyaduna dhankeeda ka dooneysey in xukunkeeda ay ku ballaariso degaanka Ogaadeenya. Damaca Xabishada ee gobolkan wuxuu bilowdey markii Menelik II-aad uu ku xasiley degaanka Harar iyo inta ka shisheysa. Wuxuu markaas qorsheeyey in uu ku soo sikado dhulka buuraha ka hooseeya ee dooxooyinka ah. Isagu xilligaas ma uusan lahayn ciidan xooggan oo uu ku qabsado dhulka baaxadda wayn oo Soomaalida xoolo-raacatada ah ay ku dhaqan yihiin.
Imbraadoorka Xabashida degaanka oo uu la deris ahaa ayaa waxay siisey fursad aan lala wadaagin in uu kula wareego ka-talinta aayaha gobolkan. Wuxuu markaas bilaabay in uu xod-xoto xoogaggii shisheeyaha ahaa ee gobolka soo gaaray. Islamarkaas isaga oo si joogto ah gobolka ugu soo diray ciidamo xooggan oo uu ku doonayay in uu ku xasiliyo maamulkiisa. Waxaa ugu horeeyey oo ciidamadii Menelik ay ku tallaabsadeen in ay Soomaalida qabadsiiyaan hannaan cashuur dhiibid ah.
Boqorkan cusub waxaa dhalay gabadha la yiraahdo Shewa Reggae. Iyadu waxay kamid ahyd labada gabdhood oo Imbraadoor Menelik uu ifka kaga tegey. Wiilkan ayaa markuu dhashay, hooyadiis oo ina Menelik ahayd darteed wuxuu la heley darajada mudnaanta ah ee la yiraahdo (Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order). Waa caddeyn wax ku-lahaanshaha dhaxalaka boqorka. Boqor Ilyaas aabihiis (Ras Mikael) wuxuu ahaa nin asalkiisu yahay Orormo. Waxaa la oran jiray Yuusuf. Isaga oo wiil yar ah ayaa waxaa soo korsadey Menelik. Wiil qurux badan oo fir-fircoon ayuu ahaa. Menelik ayaa ka beddeley magicii uu lahaa iyo diintii uu heystey wiilka yarka ah. Markii Ras Mikael uu weynaadey, Menelik ayaa ku daray labadiisa gabdhood middii yareyd. Waxaa magaceeda la oran jiray Shewa Reggae. Iyada iyo Ras Mikael waxay iska dhaleen wiilkan heley dhaxalkii awoowihiis Ilyaas oo Xabashidu ay u taqaan Lidj-yasu.
Wiil kale oo Menelik awoowe u aaha ayaa jiray, kaas oo la oran-jiray Dejazmach Wosan Seged. Waxaa dhalay gabadha la yiraahdo Zoudite oo ahayd curaddii Menelik. Sida u caadada ah hannaan walba oo keligi taliye ah, in marka odeygu gaboobo ay talada isku qabsadaan kuwii dhaxalka lahaa, ayaa markuu Menelik xanuunsadey waxaa taladii ku hardamay xubnihii qoyska. Qofka ugu dhowaa waxay ahayd xaaskiisii yaraa Taitu Batu. Iyada oo adeegsaneysa awoodda ay ku heysatey aqalka uu Menelik jiifey ayay aqalkii iyo taladiiba waxay ka eridey qof kasta oo ay isku xumaayeen. Waxaa kamid ahaa gabadhii wayneed ee Menilik, taas oo la oran jiray Zoudite. Inkasta oo gabadhan ay goor danbe soo noqotey, misana markaas hore iyada iyo wiilkeedii ahaa Dejazmach Wosan Seged waxay ku qadeen dhaxalkii carshiga.
Bartamihii bishii disember 1913-kii ayuu dhintey Menelik II-aad. Maalintuu dhintey waxay ku began tahay 13 – 15 bishaas. 10 cisho ku dhowaad waa la qarinayey geeridiisii. Ujeeddadu waxay ahayd muran ka jiray qofkii dhaxli lahaa carshiga iyo cabsi laga qabay in ay kala fur-furato imbraadooriyaddii uu xoogga ku dhisey. Doodihii badnaa ee la xiriirey dhaxal-qeybsiga iyo murankii qoyska dhex-maray, wax raad ah lagama reebin. Laakiin dadkii dhaxalka lahaa waxay isku af-garteen in ay caleema-saartaan Ilyaas markey taariikhdu ahayd 10/ 1- 1914-kii.
Dhowr bilood dabadeed, adduunka waxaa ka qarxay dagaal-waynihii I-aad (28/7-1914). Madaxdii Itoobiya, gaar ahaan wasiiradii la shaqeyn jiray Menelik, waxaa cabsi geliyay guulihii bilowga ahaa oo ay gaareen garabkii bartamaha ahaa (Central Powers) eek a soo hor-jeedey xoogaggii iyada wax la wadey. Iyada oo cabsidaas ay jidho ayaa Imbraadoor Ilyaas, bishii febrauari 1915-kii, wuxuu u safrey degmada Harar. Isagu waxaa fajaciso ku noqotey dhismihii magaalada iyo dhaqankii dadka halkaas ku noolaa. Wuxuu magaalada ugu yimid ilbaxnimo ka sareysa tii Addis-ababa tiil.
Waxaa iyana jirtay in Imbraadoor Ilyaas uu booqasho ku tegey degmada Jabuuti. Socdaalkaas oo uusan ogeysiin qunsulkii Addis-ababa u fadhiyay Faransiiska iyo xataa guddoomiyihii gobolka uga masuulka ahaa Faransa. Arintaasi wal-wal ayay ku abuurtey xiriirkii Faransa ay la lahayd Itoobiya. Waxaa iyana Ingiriiskii shaki ku abuurey in Ilyaas uu booqdey degmada Jig-jiga oo halkaas uu Soomaalidii kula kulmey, islamarkaas uu xiriir la yeeshey dhaqdhaqaaqii Daraawiishta. Bishii agosto 1915-kii, Ingiriisku wuxuu heley caddeymo muujinaya in Imbraadoor Ilyaas uu kaalmo ciidan u direy dhaqdhaqaaqii Daraawiishta. Bishii sebtember Talyaaniga ayaa isna wuxuu ogaadey in Ilyaas uu ka baxay diintii masiixiyadda oo uu ku dhaartey kitaabka Quraanka ah in uu yahay Muslim. (TIsla marjicii jore, p. 21).
Falkaas uu Ilyaas ku kacay wuxuu ku doonayay in uu mideeyo xoogga uu odeyga ka yahay iyo xoogga Soomaalida ee kala baahsan. Dabadeedna muslimiinta aqlabiyadda ah ay ka taliyaan degaanka. Qoraallo ay is-dhaafsadeen isaga iyo Sayid Maxamad Cabdulle Xasan ayaa arintaas muujineysa. Sidaa darteed wuxuu u yeertey Soomaalidii iyo Oromadii degaanka ka dhowaa isaga oo cudud iyo xoog ka raadinaya. Soomaali badan ayaa Harar ugu tagtey si ay u cududeeyaan. Dhallinyaradaas Harar buuxise ayaa waxay ku dhaato cayaari jireen:
Abeed ma jidhee
Dabadeed qoyskii reer Menelik iyo wadaaddadii kaniisadaha aad ayay arinkii u dhibsadeen. Waxay bilaabeen olole ka dhan ah Ilyaas iyo siyaasaddiisa. Xoogaggii dagaalka kula jiray garabkii bartamaha qudhooda cudud ayay ka heleen. Dabadeed 17/ 9- 1916-kii, fadhi ay Addis-ababa ku qaateen qoyskii reer boqor iyo raggii talada la hayay, waxay ku guddoonsadeen in Ilyaas xilka laga qaado. Isla goobtii waxaa lagu caleema-saarey habaryartiis Zoudite. Taas oo 14 sano astaan u ahayd boqortooyada Itoobiya. Dabadeed sanadkii 1928-kii waxaa xukunkii Itoobiya kala wareegey nin la yiraahdo Tafare Makonnene. Isagu wuxuu goor danbe la baxay magac ah Xayle Selassie. Afka amxaariga macnaha magacan wuxuu yahay awooddii saddexleyda (Power of the Trinity). Magaciisaas ayaa laga fahmayaa in uu ahaa nin diinta masiixiyadda si xooggan u haysta. Islamarkaas wuxuu ka dhashay qoyska Menelik oo waxay sheegtaan in ay ka yihiin faracii nebi Suleymaan. Iyaasna ciidamo xooggan ayaa lagu kiciyay oo so oaf-jaray awooddiisii iyo maamulkiisii.
Xilliga xoogga Xabashidu uu gobolka uga imanayay dhanka galbeed, xooggii Talyaaniga ayaa wuxuu uga soo socdey dhanka bari. Meelaha ay labada qoloba abbaaranayeen waxay ahayd ceelasha ay reer miyiga ka cabaan. Waayo goobtaas ayaa laga ogaan karaa xaaladda ay ku sugan yihiin qoysaska ree miyiga ah. Isla goobtaas ayaa laga maamuli karaa noloshood. Sida aanu arki doono, inkasta oo foofkii Xabashida uu wakhti qaatey, misana iyaga ayaa kaga guuleystey Talyaanigii oo gacanta ku dhigey dhulkii ay horey u calaamadsadeen. Sidaas ayaa heyb-wadaagta ka sokow, gobolkiina wuxuu ku noqdey mid aafooyinka la wadaaga gobolladii kale oo Soomaalidu ay ku dhaqnaayeen.
(Nuur Cali Qonof)
Qaybihii hore ka akhri http://somalitalk.com/tag/eenow/
1 Jawaab " SOOMAALI-WAYN: Dhalashadeedii iyo Dhabar-jabkeedii | Casharkii III-aad "
Tuesday, July 5, 2011 at 11:25 pm
Waxaa farxad ii ah inaan cashar taariikh ah iyo qoraal dhameystiran oo ka sheekaynaya marxalada uu dhulka Ogadeenya soo maray iyo gacmihii is-xigay ee ka qeyb-qaatay dhibaataynta iyo gumeysiga wadanka Ogadeenya uu qoraagu si mugdi aan ku jirin ugu tafatiray qalankiisa, oo runtii ah mid laga baran karo maqaalkan cashir isugu jira taariikh qoran iyo suugaan lagu cabirayo heerarka kala duwan ee qadiyadda Shacabka Soomaaliyeed Markizka ah (Ogadeenya) soo martay.
Aad ayaana ugu mahadcelinayaa qoraaga Dr.saadiq Enow